मृत्यु भैसकेका मानिस सपनामा आयर हैरान पार्नुका ९ संकेत । – AB Sansar
मृत्यु भैसकेका मानिस सपनामा आयर हैरान पार्नुका ९ संकेत ।
May 13, 2021 santoshLeaveaComment on मृत्यु भैसकेका मानिस सपनामा आयर हैरान पार्नुका ९ संकेत ।
काठमाडौं । सपना मानिसको जिवनको एक भाग हो । प्राय हामी सुतेको समयमा सपना देख्छौँ । स्वप्नशास्त्रका अनुसार सबै सपनाका आ–आफ्नै महत्व र अर्थ हुन्छन् । सपनाले भविष्यमा हुने कुनै घ ट ना का बारेमा संकेत दिइरहेका हुन्छन् । अनेक प्रकारका सपना देख्छौँ । ती मध्ये कहिले जिउँदो मानिस म रे को सपना देख्छौँ भने कहिले मृत्यु भइसकेका मानिस सपनामा आएको देख्छौँ ।
स्वप्नशास्त्र अनुसार मृ त्यु भइसकेका मानिस सपनामा आउनुका केही संकेतहरु: १.कहिलेकाँही घरका कुनै सदस्यको बिरामी भएर मृ त्यु भएको र सोही मृत व्यक्ति सपनामा स्वस्थ रहेको देख्छौँ । यदि यस्तो सपना देखियो भने मृत व्यक्ति कुनै राम्रो घरमा जन्मलिइसकेको बुझ्नु पर्छ । यस्तो सपनाले मृ त व्यक्ति राम्रो घरमा जन्म लिएर खुसी भएका कारण अब घरका सदस्यले उसको मृ त्युका का र ण दुखि नहुनु भन्ने संकेत गर्छ ।
२.यदि सपनामा मृ त्यु भएको व्यक्ति आ क्रो सित अर्थात रिसाएको अवस्थामा देखियो भने उसले हामीबाट केही चाहिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । मृ त्यु हुनु अघिका केही पूरा हुन बाँकी इच्छा भए मृत व्यक्तिले हामीबाट त्यो इच्छा पूरा गराउने कोसिस गर्छ । त्यसैले सपनामा मृ त व्यक्ति रिसाएको देखिएमा हामीले सम्झिएर भए पनि उसका बाँकी इच्छा पूरा गर्दिनु पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
३.यदि मृ त्यु भइसकेको व्यक्ति सपनामा आएर अत्यन्तै खुसी अवस्थामा वा अत्यन्तै दुखी र रोहिरहेको अवस्थामा देखिएमा सपना देख्ने मानिसको लागि शुभ संकेत हुन्छ । ४.सपनामा केही टाढाको सम्बन्ध भएको मृ त व्यक्ति देखिएमा उसले तपाइँबाट केही चाहिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
५.यदि मृत व्यक्ति बारम्बार सपनामा आउँछ र केही संकेत गर्छ भने उ केही कुरामा असन्तुष्ट छ भन्ने बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा मृत व्यक्तिको परिवारले उसको आत्माको शान्तिको लागि कुनै उपाय अपनाउनुपर्छ । मृ त व्यक्तिको नाममा मिठाइ चढाएर तर्पण दिएमा पनि उसको आत्माले शान्ति पाउन सक्छ ।
६.यदि सपनामा मृत व्यक्ति मौन अवस्थामा देखियो भने उसले तपाइँलाई कुनै गलत काम हुनबाट रोक्दै छ भन्ने बुझिन्छ । ७.मृ त व्यक्ति सपनामा आएर आशिर्वाद दिएमा सपना देख्ने मान्छे कुनै काममा सफल हुँदैछ भन्ने संकेत हुन्छ ।
८.यदि सपनामा मृ त व्यक्ति कपडा नलाएको अवस्थामा, जुत्ता चप्पल नलगाएको अवस्थामा अर्थात भोकै भएको अवस्थामा देखियो भने उसलाई यी कुराहरुको अभाव भएको बुझ्नुपर्छ । यस्तो सपना देखिएमा नजिकैको मन्दिरमा गएर यी वस्तुहरु मृ त व्यक्तिको नाममा दान गर्नु राम्रो हुन्छ । ९.यदि मृ त व्यक्ति सपनामा कतै टाढा आकाशमा देखियो भने उसले मुक्ति पाएको संकेत हुन्छ ।
पेटको जलन र एसिडिटी रोक्न गर्मीमा के गर्ने ? गर्मीका दिनहरूमा के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन ? डिहाइड्रेसन, ग्यास्ट्रिकको समस्या, पेट दुखाइ, पेटमा हुने जलन वा एसिडिटी गर्मीको अवधिमा बढ्ने गर्छ । तापक्रम बढ्दै जाँदा हाम्रो शरीरले फरक प्रतिक्रिया गर्छ । त्यसैले हामीले गर्मीको दिनमा खानाका केही चीजहरू त्याग्नैपर्छ । यदि अरू समयमा जस्तै केही खानालाई गर्मीको समयमा पनि जारी राख्नुभयो भने तपाईंको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ ।
तपाईंलाई चिसो पेय पदार्थ, चिसो चीजहरू, दूग्ध उत्पादहरू, तेल मिश्रित खाना, रातो मासु, दूध चिया वा कफी आदिमा कमी ल्याउनुपर्छ । यसको साटो तपाईंले त्यस्ता चीजहरू खानुपर्छ जसले पेटलाई चिसो बनाउँछ। जस्तै, ताजा फलफूल, काँक्रो, नरम पानी आदि गर्मीमा धेरै खानुपर्छ । गर्मीका दिनहरूमा तपाईंले तरल आहारलाई बढाउनुपर्छ। गर्मीमा खान कम गर्नुपर्ने खानाहरू ।रातो मासु
कोल्ड ड्रिंक,सबैलाई गर्मीमा चिसो चिसो पेय पदार्थ मनपर्छ । गर्मी भगाउनको लागि धेरैले चिसो पेय पदार्थ पिउने गर्छन् । चिसो पेयबाट क्यालोरीको मात्रा बढ्दै जान्छ, साथसाथै यसले शरीरलाई डिहाइड्रेट गर्न पनि सहयोग गर्छ । त्यति भन्दैमा यसलाई धेरै पिउँदा यसले असर गर्न सक्छ । त्यसैले बरू चिसो पेय पदार्थको ठाउँमा जुस र नरिवलको पानी जस्ता प्राकृतिक पेय पदार्थतिर धेरै ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
चिल्लोयुक्त जंक फुड,यदि तपाईंलाई चिल्लोयुक्त जंक फूड खान मनपर्छ भने पनि यो मौसम त्यसको लागि उपयुक्त हुँदैन । गर्मीमा तेलका कारण पेट पोल्ने समस्या हुन सक्छ । गर्मीका दिनहरूमा त्यस्तो खाना खाँदा एसिडिटी एवं छालामा समस्या समेत हुने गर्छ ।
धेरै मसालायुक्त तरकारी,नेपाली परिकारमा धेरै मसलायुक्त खानेकुरा पाइन्छ । तर गर्मी मौसमका लागि यो उपयुक्त खाना भने होइन । यो मौसममा तरकारीमा धेरै मसला, तेल, घिउ राख्नुभन्दा हल्का खुर्सानी, थोरै मसला र थोरै भुटेको तरकारी खानु उपयुक्त हुन्छ ।
दूध चिया एव‌ं कफी,दूधचिया मीठो लाग्ने पनि धेरै जना हुन सक्छन् । तर गर्मीमा पेटको स्वास्थ्यको लागि दूधको चियालाई कम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दूध चिया गर्मीमा पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुन्छ । यसबाहेक चिया गर्मीका दिनहरूमा पेटको दुखाइ र एसिडिटीको पनि कारण हुन सक्छ । दूध चिया वा कफीको सट्टा, तपाईं हरियो चिया, कालो चिया, पुदिना चिया आदि पिउन सक्नुहुन्छ।
यसकारण देउवा नेतृत्वको सरकारको पक्षमा ‘युटर्न’ भयो कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा केही दिनयता अनौठो दृश्य देखिएको छ । आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा जसले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा रोक्न चाहेको छ, त्यही पक्षले सरकारको नेतृत्व गर्नुस् भनेर हारगुहार गरिरहेको छ ।
जबकी २८ फागुन अगाडिसम्म वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि गगन थापासम्म सबैले प्रतिपक्षमा बस्ने ‘म्याण्डेट’ पाएको कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताइरहेका थिए । संस्थापन इतरका नेताहरु अचानक कसरी युटर्न भए ? किन सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् उनीहरु ?ती नेताहरुका अनुसार, २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँ ता उने फैसला गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको ढोका खुले पनि संस्थापन इतर पक्षका नेताहरु यसबारेमा मौन नै थिए ।
२५ फागुनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं बूढानीलकण्ठ पुगेर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको सरकार बनाउने प्रस्ताव नै राखे । जसपाको एउटा खेमा पनि यसमा तयार देखियो । तर स्वयं कांग्रेसका नेताहरु एकमत थिएनन् ।
पौडेल निकट एक नेता भन्छन्, ‘सभापति प्रधानमन्त्री बन्नु सभापतिका आकांक्षीहरुका लागि क्षति नै हो । तर तत्कालको क्षति व्यहोरेर पनि देउवालाई अगाडि बढाउन सबै तयार भएका छौं । किनकी ओली सरकार रहँदा अझ ठूलो क्षति हुन्छ ।’
सभापति देउवाले पनि बैठक राखेर आधिकारिक धारणा बनाउन पहल नगरेपछि नेताहरुले आफ्नो अनुकुल धारणा राख्न थाले । कतिपय नेता कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएपनि संस्थापन इतरका बहुसंख्यक नेताहरुले सरकार नै नबन्ने अवस्था आए गाँठो फुकाउनुपर्ने, तर सरकारमा जान नहुने धारणा राखे ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिपक्षी भूमिकाबाट कांग्रेस डगमगाउन नहुने बताउँदै आएका थिए । तर २८ फागुनमा संस्थापन इतरका नेताहरु देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यो दिन जसपाका नेताहरु आफूलाई भेट्न ४ बजे आउने भएपछि देउवाले ३ बजे पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसहितको बैठक बोलाएका थिए । त्यसअघि पौडेल समूहका नेताहरु महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा भेला भएका थिए ।
त्यहाँ पनि नेताहरुले सरकारलाई फ्लोरबाट मात्र समर्थन गर्नुपर्ने, पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा पनि देउवाबाहेकका अरुले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । किनकी कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौ ७–१० मा हुँदैछ र प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका बेला देउवालाई सभापतिमा हराउन निकै गाह्रो हुन्छ भन्ने पौडेल पक्षको बुझाइ छ ।
पौडेल समूहका नेताहरुका अनुसार यो तर्क कमजोर छैन । किनकी आफ्नो पक्षमा लाग्ने नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि उनीसँग मन्त्री तथा विभिन्न पद दिन सक्छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्न राज्य सत्ताकै ‘दुरुपयोग’ पनि हुनसक्छ । त्यसो भए फेरि किन एक स्वरमा देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने निचोडमा पुग्यो त्यो बैठक ? एक नेताका अनुसार त्यो दिन महामन्त्री शशांकको कोठामा प्रमुख नेताहरुबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । त्यहाँ देउवाको नेतृत्वमा सरकार नबनाए हुने सम्भावित तीन परिदृश्यको चर्चा भएको थियो ।
एक : केपी ओलीले राज्यसत्तामा जस्तो संरचना बनाएका छन्, त्यसको चुनावी फाइदा उनलाई हुन्छ । दोस्रो : केपी शर्मा ओली पनि हार्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । नभए उनको बिजेताको छवि चुनावमा भारी पर्नसक्छ ।र, तेस्रो : प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच ‘सेटिङ’ कायमै रहे कांग्रेसलाई थप क्षति हुनसक्छ ।
यही जोखिम टार्न देउवाकै नेतृत्वमा भएपनि सरकार बनाउन आफूहरुले सहयोग गर्नुपर्ने नेताहरुको तर्कमा रामचन्द्र पौडेल लगायत सबै सहमत भएको एक नेताले बताए । त्यसपछि पौडेलले त्यहीँबाट सभापति देउवालाई फोन गरेर ‘सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिनुस् र जसपा नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीले जेजे माग सम्बोधन गर्छु भनेका छन्, हामी पनि पूरा गर्छौं भन्नुस्’ भनेका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार पनि सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘साबिकको नेकपा, एमाले र माओवादी अलग भएपछि यो सरकार अल्पमतमा परिसक्यो’ उनले भने, ‘दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले पहिलो दल एमालेबाहेक अरुलाई मिलाएर सरकार बनाउन नेतृत्व लिनुपर्छ र मुलुकलाई सरकारविहीन हुने अवस्थामा पुग्न दिनु हुँदैन ।’
कति सहज छ देउवा नेतृत्वको सरकार? पार्टीभित्र एकस्वर भएपनि कांग्रेस सभापति देउवा आफैंले चाहिँ अझै सरकार गठनको अग्ररसता लिएका छैनन् । उनको तर्क छ, ‘परिपक्व अवस्था अझै बनिसकेको छैन ।’
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि त्यही भन्छन् । ‘प्रधानमन्त्री पदले कांग्रेसको ढोका ढकढकाएको छ, तर त्यसका लागि चाहिने वातावरण विकसित भइनसकेकाले धेरै अग्रसरता नलिएको हो’ उनले भने, ‘नेतृत्व लिनेतर्फ अलिकति रुची नै नराखेको र उदासिनता देखाएको चाहिँ होइन ।’ आफूहरु निरन्तर छलफलमा रहेका र उपयुक्त वातावरण बनेपछि सरकार गठनको नेतृत्व गर्ने उनले बताए ।
देउवा निकट नेताहरुको आशंका ३२ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीतर्फ छ, जहाँ सरकारमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विवाद छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा छन् । तर, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो जसले मागमुद्दा सम्बोधन गर्छ, उसलाई समर्थन गर्ने भनेर तुलनात्मक रुपमा ओलीप्रति पनि नरम देखिएका छन् ।
ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । उनले पार्टीलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीको टोलीसँग वार्ता गर्न नेताहरु खटाएका थिए । यदि जसपा एकमतले कांग्रेस–माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयमा नपुगे सरकार गठनमा कुनै पनि बेला अप्ठ्यारो पर्नसक्ने देउवा निकट नेताहरुको दाबी छ ।तर, कांग्रेस–माओवादीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने मत राख्ने जसपा नेताहरु भने कांग्रेस सभापति देउवाले सरकार गठनको अग्रसरता नलिँदा यो अवस्था आएको बताउँछन् । कांग्रेस सभापति देउवाले जसपाको संकेत कुर्ने र जसपा दोधारमै रहिरहने यो अवस्था कति दिन रहन्छ अनुमान गर्न कठिन भएको नेताहरु बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना
ललितपुरमा एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु यसरि पो भएको रहेछ
March 8, 2022 Ab - News